Madaxwaynaha Galmudug oo khudbad ka jeediyey Golaha Aqalka Sare ee dalka | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Madaxwaynaha Galmudug oo khudbad ka jeediyey Golaha Aqalka Sare ee dalka
Sep 15, 2020 - 8 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, ayaa hadal-jeedin ka sameeyey kulan gaar ah oo ay iskugu yimaadeen Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa Aqalka Sare la wadaagay warbixin ku saabsan Xaaladda iyo howlihii ka qabsoomay Galmudug asagoona is dul taagay arrimaha Dib-u-heshiisiinta bulsho iyo Siyaasadeed, amniga iyo iskaashiga Dowladaha xubnaha ka ah DF Soomaaliya iyo shirarkii lagu marti geliyay Dhusamareeb loogana arrinsanayay arrimaha doorashooyinka qaran.
Kulankan oo uu shir guddoomiyey Guddoomiyha Aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaan ka qeybgalay ku xigeenadiisa 1-aad iyo 2-aad, Xubnaha Guddiga joogtada ah iyo qaar kamid ah gollaha xukuumadda Galmudug.
Qoorqoor markii uu siyaasaddii ku haftay wuxuu bilaabay Copycat inuu sameeyo.
Jaanis dahabiya ayaa soo maray laakiin khibrad xumidiisa iyo damac yar oo ka galay xoogaagii Qatar ayaa haadaan ka riddey
Meeshani,waaba iska meel ay Habar walina u qudbadayso..Meesha aan la galinkarin oo Homaaiye kooxeedyadu agteeda marin karin waa Golaha shacabka kkkkk
Mr Deni ayaa codsaday inuu golaha shacabka ka qudbadeeyo.Formaajo ayaa ku yidhi’Boowe aa kula tahay kk
Formaajo:Boowe halkaasi anuubaa ka qudbadaynkara kk
Denibaa cadhooday.Mursal ayuu u tagay.Mr Mursal Yaa yidhi’Boowe kumaad ahayd?
Gudoomiye gobol inaad tahay saw ma ogid,xagee ku aragtay gudoomiye gobol oo gole shacab u qudbadeeya?
Deni,mar labaad ayuu in-dhaha taagay.
Dee marki dambe ayaa meeshan la keenay kkkkkkkkkkkkkk
Somaliya waa meel cajib ah.
Qoorqoor isagoo aan ahayn siyaasi ayaa hadana waxaa ku dhacay waxa la dhaho “political dilemma”.
Dhan uu isu qaado ayaa garan la yahay.
Laakiin waxaa cajiib ahayd sida uu uga aamusay ridistii Khayre oo shakhsiga kaliya oo Khayre naf iyo maalba uu dul dhigay.
Laakiin koley waa qayb ka mida jahwareerka ku dhacay,oo dhegta ayaa loogu sheegay in isaga looga dambayn doono ninka RW noqonaya.
Fahad & Farmaajo waxay ogaayeen taaka kasta iyo eray walba oo Khayre kor iyo hoosba u sheego waayo Khayre Mobile-kiisa ayaa spy program lagu xidhay wuxuu sheegana toos ayaa loo dhagaysan jirey muddo 2 sano ku siman.Marka CBB qaar ka mida ay leeyihiin codod baa laga hayaa Khayre waa dhab taasi
Khayre waa nin wax badan ku soo kordhiyay wanaaga arimaha somalida.
Dee yaaba ku hasyta isaga iyo Fromaajo.
Labadaasi ayaa meeshan isku helidoona.
Qoor-qoor waa nin Ree G.Mudug ah, Ree Galmudug munaafaqadda iyo shisheeye u dabadhilifaynta ma yaqaannaan…
Asagoo gobta ILMA GAREEN heli kara miyuu mahbar iyo dallaaliin saf la galaa?…
Dani isagaa Qoor-qoor ka masayray oo qarracan bastiis ah… Wuxuu arkay in Garoowe 1 2 3 loo beddelay Samareeb 1 2 3 4, awal Ar Farmaajo ii geeya ayay ahayde hadda waa Ilma gareen ii geeya…
Dalkan rag baa u kacay, mar dhawna waa laga dul qaadayaa gafane kasta uu dhiigga ka jaqaya…